काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अस्पतालजन्य हानीकारक फोहोर प्रशोधनशाला निर्माण गर्ने विषयमा छलफल – Sajha Pati
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अस्पतालबाट उत्पादन हुने हानीकारक फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रशोधन प्लान्ट राख्ने विषयमा आज छलफल भएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को व्यवस्थाअनुसार हानीकारक फोहोर उत्पादक आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधि महङ्गो भएकाले साना अस्पताल र पोलि क्लिनिकहरुमा प्रणाली जडान गर्न व्यवहारिक देखिएन । यसबेला महानगरले गर्ने सहजीकरण कस्तो खालको हुन सक्छ? विषयमा छलफल केन्द्रीत थियो । हानीकारक फोहोरले सामान्य फोहोरलाई पनि जोखिमपूर्ण बनाएको छ । यसले फोहोर व्यवस्थापनमा सम्लग्न व्यक्ति, उसको परिवार र समुदायमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यस प्रकारको फोहोरले माटो र पानीलाई दुषित बनाएर वातावरणीय समस्या बढाइरहेका छन् । यस खालका समस्या सबैका साझा समस्या भएकोले सहभागितामा समाधान खोज्नु पर्छ, सहभागीको भनाइ थियो ।
छलफलमा महानगरका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले, प्रविधि र प्राविधिक तथा छनौट भएको प्रविधि जडान गर्ने स्थान प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकोले परिणाम ल्याउन ढिलो हुने गरेको बताउँदै कानुनको पालना गर्दै प्रणाली जडान गर्ने छिटो बाटो आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । ‘मेरो वडामा धेरै अस्पताल छन् । नमूनाका लागि यहाँबाट प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरौं ।’ बैठकमा वडा ३ का अध्यक्ष दीपक के. सी. ले, साझा प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गर्ने हाम्रो योजना हो । त्यस क्रममा वडा १२ का अध्यक्ष एवं वातावरण समितिका संयोजक विकास डंगोलले, महानगरको वातावरणीय सुधारका लागि आफ्नो अर्जुन दृष्टि रहेको र यसलाई पूरा गराउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । वडा ४ का अध्यक्ष मोहन विष्टले काठमाडौंभरिको समस्या एकैपटक समाधान गर्ने गरी काम गरेर परिणाम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गंगा श्रेष्ठको नयाँ गीत बजारमा